Author: Dazilkree Akihn
Ninka rabay inuu Maxamuud soo galo gabayga labada dhinacba waa lagu sheegaa, waxayse u badan soomaaluda inuu Reer Warfaa ahaa. Cabdullaahi Dhoodaan waa kii lahaa isagoo caddaynaya guud ahaan in gabay iyo geeraar ama gar iyo gorfayn kolba kay joogtaba qofka iyo aragtidiisa la isku astayn karo, soomaalira aan dhib badnayna loo odhan karo Allay lehe qawlkaasi qawlkii hebel waayahay: Wuxuu si dhaxal gal ah u difaacay Soomaalida kale ee nimanka gabyey ku xadgudbeen.
Suugaanleydu markii ay hubiyaan in habka iyo hanaanka gabayga ka muuqda yahay kii hebel lagu yaqaanay, waxay isla dhex qaadaan hadalo xigasho ah iyagoo leh wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa. Cabdi Galayax ayey intaasi si gooni ah u dhibtay oo jawaab ka bixiyey. Waxaa ku soomaakida abayadiisa midkood: Hurgumo waa silsilad aadkii uu shiniyeeyey Khaliif Sheekh Maxamuud.
Khaliif oo dhinac ah iyo intooda kale oo dhinaca kale ah ayey ku socotay, waxaase ugu cadcaddaa gabayafa Khaliif geed walba ka saaray Dharbaaxo Jin oo aad moodo inuu si gooni ah ubbada ugu biyeystay inaan Khaliif kala nabar dambayn.
Waxay ka koobnayd ugu yaraan 13 gabay waxayna ka billaabatay Iriirka Siiga Boqorka oo ku yaala banka caanka ah ee Qorraxeey.
Deelqaafka iyo gebidhacu saw gabayga cadowgii ma ahaan jirin. Waxaa la xaqiijiyey in Khaliif Carabaha joogay markii uu gabaygii ugu horeeyey mariyey. Fakad ayaa la gabayadz oo ku jawaabay: Dhaanto Saar Saylici Fanka Soomaalida. Ugu dambaysta, waxaan diyaar u ahay inaan laab furan ku dhegeysto wixii dhalliil ah ama sixid ah oo akhristeyaashu ay ii soo jeediyaan.
Silsiladan in kasta oo aad looga tiriyo goboladii ay ka fuftay, waxaa la odhan karaa Soomaali Weyn dhexdeeda siddii la rabay uguma faafin. Inta badan waxay u billowdaan si kadiso ah oo aan qorshe hore lahayn. Maxamuud Cali Beenaleey wuxuu tiriyey gabay dheer oo kusoo caano shubtay beydadkan hoose: Waxaan aad uga helay sida hufan ee Dhoodaan u dhaliilay garaadka Cabdi Iidaan iyo gabayga kasoo yeedhayba.
Maxaa ka dhalan kara ka bixitaanka ciidammada Mareykanka ee dalka Suuriya? Ninkaa dambe waxaa magac ugu baxaa beyd gaab iyo goray ciil, waxaana lala mataaniyaa macallin qoryaale iyo kitaab gaab agbayada Todobada Mingaliyo iyo Suddamada dhinacna u dhaafin.
Cawaale Xuseen awalle gmail. Afarta xigta rag qosol been ah maqashiinaya hoosna ka minja xaabinaya, doqon qufacday wixii asiibayna. Muranka in abwaan Raage Ugaas Warfaa bilabay hooyaalayeey eeg tixdan hoose cid ka horaysay oo sidan u qeexdayna gabayadx jirto mar hadaanan lahayne, suugaanta qoran wixii ku cad unbaa raadraac ah.
Abwaan ayaa qoonsada ummuur taagan dabadeed dareenkiisa ku rogroga duruufaha u muuqda. Caawi Barakacayaasha Sool Account Number: Labada dhinacba rag tiiri ah ayaa soo gafray gabayo dhammaan boqol lagala bax ah. Maax Dhagoole Ogaadeen ayaa markii ay gabayadii ay is dhaafsadeen Camanje, Cali Geele, Beenaleey loo geeyey wuxuu isna ku darsaday gabay ay ka mid ahayd: Ninkii billaabay wali ma hayo, laakiin ragga caanka ah ee soo galay waxaa ka mid ah Cabdullaahi Dhoodaan, Yuusuf Dheere Maxamed Sugaal, Gen.
Cali Geele halkaa haddii uu ka bud yidhi, Camanje ayaa la yaabay sababta Cali gabayga ugu jiiday Ogaadeen. Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda.
Guba waxay curatay abbaaraha horraantii aad, waxayna socotay muddo 10 sano ku dhow. Sifooyinkaa iyo kuwa kalaba markii uu qanciyo ayey ama la qurux badnaataa inuu jawaabo ama ay la ahaan weydaa inuu dhexboodo.
Xarbi Ismaaciil ayaa bari gabay digasho ah dhinaca Qawdhan iyo qoykiisa u diray. Horraantii aadkii ayey ururo mucaarad ahi ku kaceen dowladii Maxamed Siyaad, jabhadihii gobonimo doonka. Waxyaabaha kale ee dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan waa gaare, bulshada Soomaali waxay ku caan tahay suugaanta iyo sooyaal odhaaheed iyada oo loogu magac daray Qarankii Gabayada.
Waa kaligii taliye iyo gaddiisiiye, wuxuu damcay inuu shacbiga Soomaaliyeed isku mashquuliyo sopmaalida uu dabadeed. Halqabsi iyo odhaahyo badan oo maanta bulshada dhexdeeda caan ku ah ayaa waxay ka. Wuxuu jeclaa Qamaan inaan Cali Dhuux iyo isaga la dhex marin. Waxaa kale oo xusid mudan Maxamuud Cali Beenaleey oo aan labadaa qoys midna ahayn inuu gabay dhexdhexaad ah soomaalixa darsaday kadib markii niman shirqool waday ay isku dayeen inay kusoo jiidaan hardankii maansada.
Silsiladdan waxaa furay nin lagu magacaabo Cali Banfis oo reer Hargaysa ah laakiin xilligaa Xamar joogay. Wuxuu jeclaa Qamaan inaan Cali Dhuux iyo isaga la dhex marin, gabaygan uu Maxamed ugu jawaabayna wuxuu arkayey inuu kaga haboonaan lahaa inuu Cali jawaab u noqdo marka uu mid kale soo celiyo.
Gabaygiisii jawaabta ahaa wuxuu u bixiyey Duraaqsi. Waxaa caado ahayd rag door ah oo dhinac kasoo wada jeeda ama isku afkaar ah oo aan waxba isku diidanayn inay isku xigaan oo ay kaliya isu marxabeeyaan. Rag kale ayaa jiray. Dhawr abwaan oo Hal-abuur wanaagsan leh ayaa ku jiray. Habka ku luuqaynta suugaanta maansada, gaar ahaan hooyaalayeey ayaa wuxuu bilowday waayihii abwaanka caanka ah ee Raage Ugaas Warfaa, isuguna noqday qofka habkaas soo caanbixiyay.